Maxay Tahay Wada Xiriirka Kooxda Inuu Uga Muhiimsan Yahay Meeriskaaga Martech | Martech Zone
Khamiis, Juun 18, 2019 Jimco, Juun 19, 2019 Maria Bocheva
Aragtida aan caadiga ahayn ee Simo Ahava ee tayada xogta iyo qaabdhismeedka isgaarsiinta ayaa cusbooneysiisay qolka oo dhan Tag Falanqaynta! shir. OWOX, Hogaamiyaha MarTech ee gobolka CIS, ayaa kumanaan khubaro ah ku soo dhoweeyay kulankaan si ay ula wadaagaan aqoontooda iyo fikradahooda.
Kooxda OWOX BI waxaan jeclaan lahaa inaad ka fikirto fikradda ay soo jeedisay Simo Ahava, taas oo hubaal awood u leh inay ganacsigaaga kobciso.
Tayada Xogta iyo Tayada Ururka
Tayada xogta waxay kuxirantahay qofka falanqeynaya. Caadi ahaan, waxaan eedeyn doonnaa dhammaan cilladaha ku jira xogta qalabka, socodka shaqada, iyo xog uruurinta. Laakiin taasi macquul ma tahay?
Marka runta loo hadlo, tayada xogta waxay si toos ah ugu xiran tahay sida aan ugula xiriirno ururadayada dhexdooda. Tayada hay'addu waxay go'aamisaa wax walba, iyadoo laga bilaabayo habka loo qodayo xogta, qiyaasta, iyo cabirka, iyadoo lagu sii wado howsha, laguna dhammaanayo tayada guud ee badeecada iyo go'aan gaarista.
Shirkadaha iyo Qaabdhismeedkooda Isgaarsiinta
Aynu qiyaasno shirkad ku takhasustay hal qalab. Dadka ku jira shirkaddani waxay ku fiican yihiin helitaanka dhibaatooyinka qaarkood iyo iyaga u xallinta qaybta B2B. Wax walba way fiican yihiin, shaki kuma jiro inaad ogtahay lamaanayaal sidan oo kale ah.
Dhibaatooyinka soo raaca ee howlaha shirkadahan waxay ku qarsoon yihiin hanaanka muddada-dheer ee kor loogu qaadayo shuruudaha tayada xogta. Isla mar ahaantaana, waa inaan xusuusanno aaladaha loo sameeyay in lagu falanqeeyo ka shaqeynta xogta iyadoo la adeegsanayo xogta oo keliya lagana go'doomiyo dhibaatooyinka ganacsiga - xitaa haddii loo abuuray inay xalliyaan
Taasi waa sababta shirkad kale oo nooc ahi u muuqatay. Shirkadahani waxay ku takhasusay ka-shaqeynta khaladka shaqada. Waxay ka heli karaan dhibaatooyin fara badan geedi socodka ganacsiga, kuna ridaya sabuuradda, una sheegi karaan maamulayaasha:
Halkan, halkan, iyo halkaas! Dalbo istiraatiijiyaddan ganacsi ee cusub waadna fiicnaan doontaa!
Laakiin waxay u egtahay mid aad u wanaagsan oo aan run noqon karin. Waxtarka talooyinka ee aan ku saleysneyn fahamka qalabka ayaa shaki leh. Shirkadahaas la-talinta ahna uma muuqdaan inay fahmayaan sababta dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay u soo muuqdeen, sababta maalin kasta oo cusub u keento kakanaanta qaladaad cusub iyo qaladaad, iyo qalab si khaldan loo dhigay.
Marka waxtarka shirkadahan iskood u yaryihiin.
Waxaa jira shirkado leh khibrad ganacsi iyo aqoon qalab. Shirkadahan, qof walba waxaa ku mashquulsan shaqaaleysiinta dad leh tayo sare, khubaro hubaal ku ah xirfadahooda iyo aqoontooda. Qabow Laakiin sida caadiga ah, shirkadahaani uma jeedaan inay xalliyaan dhibaatooyinka isgaarsiinta ee kooxda dhexdeeda, oo ay inta badan u arkaan wax aan muhiim ahayn. Marka markay dhibaatooyin cusub soo muuqdaan, ugaarsiga sixirku wuu bilaabmaa - khaladkeedu yaa khaldan? Waxaa laga yaabaa in khabiirada BI ay ku wareereen howlaha? Maya, barnaamijyayaashu ma aysan aqrin tilmaanta farsamada. Laakiin isku soo wada duuboo, dhibaatada dhabta ah ayaa ah in kooxdu aysan si cad uga fikiri karin dhibaatada si wada jir ah loogu xaliyo.
Tani waxay ina tuseysaa in xitaa shirkad ay ka buuxaan khubaro qabow, wax walba ay qaadan doonaan dadaal ka badan intii loo baahnaa haddii ururku uusan ahayn baaluq ku filan. Fikradda ah inaad noqotid qof weyn oo masuul ah, gaar ahaan dhibaatooyinka, waa waxa ugu dambeeya ee dadku ka fikiraan inta badan shirkadaha.
Xitaa ilmahayga laba jirka ah ee aadaya xanaanada caruurta ayaa umuuqda inuu ka bisilyahay qaar kamid ah ururada aan lasoo shaqeeyay.
Ma abuuri kartid shirkad wax ku ool ah oo keliya adoo kireysanaya tiro badan oo takhasus leh, maadaama dhammaantood ay ku milmeen koox ama waax. Marka maamulku wuxuu sii wadaa inuu shaqaalaysiiyo takhasusleyaal, laakiin waxba isma beddelo maxaa yeelay qaabdhismeedka iyo caqliga shaqo-socodka isma beddelo gabi ahaanba.
Haddii aadan sameynin wax aad ku abuurtaan wadiiqooyin isgaarsiineed gudaha iyo dibedda kooxahan iyo waaxyadan, dhammaan dadaalladaadu waxay noqonayaan kuwo aan macno lahayn. Taasi waa sababta istiraatiijiyadda isgaarsiinta iyo qaan-gaadhka ay diiradda u saareysaa Ahava.
Sharciga Conway ee Loo Adeegsaday Shirkadaha Falanqaynta
Konton sano ka hor, barnaamijiye weyn oo lagu magacaabo Melvin Conway ayaa soo jeediyay talo markii dambena caan ku noqotay sharciga Conway:
Ururada nidaamyada nashqadeeya. . . ayaa ku qasban inay soo saaraan naqshado kuwaas oo nuqullo ka ah qaab-dhismeedka isgaarsiinta ee ururradan.
Melvin Conway, Sharciga Conway
Fikradahan ayaa soo muuqday xilli hal kombiyuutar uu hal qol ku habboon yahay! Bal qiyaas: Halkaan waxaan ku leenahay hal koox oo ka shaqeynaya hal kumbuyuutar, halkaasna waxaan ku haysannaa koox kale oo ka shaqeyneysa kombiyuutar kale. Nolosha dhabta ah, sharciga Conway wuxuu ka dhigan yahay in dhammaan cilladaha isgaarsiinta ee ka dhex muuqda kooxahaas ay ka muuqan doonaan qaab-dhismeedka iyo waxqabadka barnaamijyada ay horumariyaan.
Aragtidan ayaa boqolaal jeer lagu tijaabiyay dunida horumartay wax badana waa laga hadlay. Qeexitaanka ugu qeexan ee sharciga Conway waxaa sameeyay Pieter Hintjens, oo ah mid kamid ah barnaamijyada ugu saameynta badan horaantii 2000, oo yiri "hadaad kujirto urur xishood, waxaad sameyn doontaa software xishood ah." (Amdahl to Zipf: Toban xeerar fiisikiska dadka)
Way fududahay in la arko sida sharcigan uga shaqeeyo suuqgeynta iyo falanqaynta adduunka. Adduunkan, shirkaduhu waxay la shaqeynayaan xaddi badan oo xog ah oo laga soo ururiyay ilo kala duwan. Dhamaanteen waan isku raaci karnaa in xogta lafteeda ay cadaalad tahay. Laakiin haddii aad si dhow u baarto macluumaadka, waxaad arki doontaa dhammaan cilladaha hay'adaha ururiyay xogtaas:
Qiimayaasha maqan ee injineeraduhu aysan uga hadlin arrin
Qaabab qaldan oo aan cidina dhag jalaq u siin oo aan cidina ka hadlin tirada meelaha jajab tobanlaha ah
Dib udhaca isgaarsiintu halkaasoo qofna uusan aqoon qaabka wareejinta (Dufcaddii ama durdurkii) iyo cidda ay tahay inuu helo xogta
Taasi waa sababta nidaamyada isdhaafsiga xogta ay u muujiyaan cilladaheena gebi ahaanba.
Tayada xogta waa ku guuleysiga takhasusleyaasha qalabka, khubarada habsami u socodka shaqada, maareeyayaasha, iyo wada xiriirka dhammaan dadkan.
Qaabdhismeedka Isgaarsiinta ee ugu Fiican uguna Xun ee Kooxaha Maaddooyinka Badan
Kooxda mashruuca caadiga ah ee shirkadda 'MarTech' ama shirkadda falanqaynta suuqgeynta waxay ka kooban yihiin khubaro sirdoonka ganacsiga ah (BI), khubaro saynisyahanno ah, naqshadeeyayaal, suuqgeyaal, falanqeeyayaal, iyo barnaamijyo (isku dar kasta).
Laakiin maxaa ku dhici doona koox aan fahmin muhiimadda wada xiriirka? Aan aragno. Barnaamijyayaashu waxay qori doonaan lambar muddo dheer, iyagoo dadaalaya, halka qayb kale oo kooxda ka mid ahna ay sugi doonaan inta ay usha dhaafayaan. Ugu dambayn, nooca beta ayaa la sii dayn doonaa, qof walbana wuu ka gunuunaci doonaa sababta ay u qaadatay muddada dheer. Markayna cilladda ugu horreysa soo muuqato, qof kastaa wuxuu bilaabi doonaa inuu raadsado qof kale oo uu eedeeyo laakiin ma raadin doono siyaabo looga fogaado xaaladdii halkaas ku gaadhay.
Haddii aan si qoto dheer u eegno, waxaan arki doonnaa in ujeeddooyinka wadajirka ah aan si sax ah loo fahmin (ama gabi ahaanba). Xaaladda noocaas ah, waxaan heli doonnaa badeecad dhaawacan ama cilladaysan.
Tilmaamaha ugu xun ee xaaladdan:
Ka-qaybgal aan ku filnayn
Wada shaqeyn la’aan
Sideen u hagaajin karnaa? Suugaan ahaan adigoo dadka ka dhigaya inay hadlaan
Aynu isu soo ururinno qof walba, dejino mowduucyo wadahadal ah, oo aan jadwal u qabanno kulammada toddobaadlaha ah: suuqgeynta BI, barnaamijyada lala yeesho naqshadeeyayaasha iyo khubarada xogta. Markaa waxaan rajeyneynaa in dadku ka hadlaan mashruuca. Laakiin taasi wali kuma filna maxaa yeelay xubnaha kooxdu wali kama wada hadlaan mashruuca oo dhan mana wada hadlaan kooxda oo dhan. Way fududahay in baraf la hoos dhigo tobanaan kulan oo aan lahayn meel laga baxo iyo waqti aan shaqada lagu qaban. Farriimahaas kadib shirarka kadib waxay dili doonaan waqtiga intiisa kale iyo fahamka waxa xiga ee laqabo.
Taasi waa sababta kullanku u yahay tillaabada koowaad oo keliya. Weli waxaan haynaa dhibaatooyin qaar:
Ujeeddo wadaag la’aan
Mararka qaarkood, dadku waxay isku dayaan inay u gudbiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan mashruuca asxaabtooda. Laakiin halkii farriinta la marin lahaa, mashiinka xanta ayaa wax walba u sameeya iyaga. Marka dadku garan waayaan sida loola wadaago fikradahooda iyo fikradahooda si sax ah iyo jawiga saxda ah, macluumaadka ayaa lumaya wadada loo maro qaataha.
Kuwani waa calaamadaha shirkadda la halgameysa dhibaatooyinka isgaarsiinta. Oo waxay ku bilaabataa inay ku daaweyso iyaga kulamada. Laakiin marwalba waxaan heysanaa xal kale.
U horseed qof kasta inuu kula xiriiro mashruuca.
Tilmaamaha ugu wanaagsan ee qaabkan:
Isweydaarsiga aqoonta iyo xirfadaha
Waxbarasho aan joogsi lahayn
Tani waa qaab dhismeed aad u adag oo adag in la abuuro. Waxaa laga yaabaa inaad taqaanid qaabab kooban oo qaadaya qaabkan: Agile, Lean, Scrum. Macno malahan waxaad ku magacowdo; dhammaantood waxay ku dhisan yihiin mabda'a ah "in wax walba isla wax la isla qabsado". Dhamaan jadwalladaas, safafka shaqada, bandhigyada demo, iyo shirarka istaagga waxaa looga dan leeyahay in dadku ka wada hadlaan mashruuca marar badan iyo dhammaantood.
Taasi waa sababta aan u jeclahay Agile wax badan, maxaa yeelay waxaa ku jira muhiimada wada xiriirka oo shardi u ah badbaadada mashruuca.
Iyo haddii aad u maleyneyso inaad tahay falanqeeye aan jeclayn Agile, u fiirso si kale: Waxay kaa caawineysaa inaad muujiso natiijooyinka shaqadaada - dhammaan xogtaada la farsameeyay, dashboodyada waaweyn, xogtaada - si aad dadka u sameyso mahadnaq dadaalkaaga. Laakiin si taas loo sameeyo, waa inaad la kulantaa asxaabtaada oo aad kala hadashaa miiska wareega.
Maxaa xiga? Qof kastaa wuxuu bilaabay inuu ka hadlo mashruuca. Hadda waxaan haynaa si loo caddeeyo tayada ee mashruuca. Si tan loo sameeyo, shirkaduhu waxay sida caadiga ah kireystaan ​​la-taliye leh shahaadooyinka xirfadeed ee ugu sarreeya.
Qiyaasta ugu weyn ee la-taliye wanaagsan (waan kuu sheegi karaa maxaa yeelay waxaan ahay la-taliye) wuxuu si joogto ah u dhimayaa ku lug lahaanshihiisa mashruuca.
La-taliyuhu ma quudin karo oo keliya shirkad qaybo yar oo qarsoodi ah oo xirfad leh maxaa yeelay taasi kama dhigayso in shirkaddu ay bislaato oo ay iskeed isu taagto. Haddii shirkaddaadu aysan sii noolaan karin la-taliyahaaga la'aantiis, waa inaad tixgelisaa tayada adeegga aad heshay.
By habka, la taliyuhu waa inuusan sameyn warbixinno ama uusan kuu noqon gacmo dheeri ah. Waxaad ku leedahay asxaabtaada gudaha taas.
Ujeedada ugu weyn ee shaqaaleysiinta lataliye waa waxbarasho, hagaajinta qaababka iyo hababka, iyo fududeynta isgaarsiinta. Doorka la taliyuhu maahan warbixin bille ah ee waa inuu isagu naftiisa ku beero mashruuca oo uu gebi ahaanba ku lug yeesho hawl maalmeedka kooxda.
wanaagsan A lataliyaha suuq geynta istaraatiijiga ah wuxuu buuxiyaa nusqaamaha aqoonta iyo fahamka kaqeybgalayaasha mashruuca. Laakiin isaga ama iyadu waligood shaqadda qof uma qaban karaan. Oo maalin maalmaha ka mid ah, qof kastaa wuxuu u baahan doonaa inuu si fiican u shaqeeyo la-taliyaha la'aantiis.
Natiijooyinka wada xiriirka wax ku oolka ahi waa maqnaanshaha ugaarsiga saaxiradda iyo farta oo la fiiqo. Kahor intaan hawsha la bilaabin, dadku waxay la wadaagaan shakiga iyo su'aalaha xubnaha kale ee kooxda. Marka, dhibaatooyinka badankood waa la xaliyaa kahor shaqadu intaysan bilaaban.
Aynu aragno sida waxaas oo dhami u saameynayaan qaybta ugu murugsan ee shaqada falanqaynta suuq-geynta: qeexidda xogta socodka iyo isku-darka xogta
Sidee Qaab Dhismeedka Isgaarsiinta looga Muuqdaa Wareejinta Xogta iyo Hawsha?
Aynu u malayno inaan haysanno saddex ilo oo na siinaya xogta soo socota: xogta taraafikada, macluumaadka badeecada e-commerce / xogta iibsiga ee barnaamijka daacadnimada, iyo xogta falanqaynta moobiilka. Waxaan u mari doonnaa marxaladaha ka baaraandegidda xogta mid mid, annaga oo ka soo deyn doonna dhammaan xogtaas Google Cloud illaa aan u dirayno wax walba oo muuqaal ah Macluumaadka Google Data iyadoo la kaashanayo Google BigQuery.
Iyada oo ku saleysan tusaalaheena, waa maxay su'aalaha ay dadku weydiinayaan si loo hubiyo wada-hadal cad inta lagu jiro marxalad kasta oo lagu shaqeynayo xogta?
Marxaladda xog aruurinta. Haddii aan ilowno inaan cabirno wax muhiim ah, dib ugama noqon karno waqtiga oo aan dib u cabbiri karno. Waxyaabaha la tixgelinayo ka hor:
Haddii aynaan ogeyn waxa loo yaqaanno cabbiraadaha ugu muhiimsan iyo isbeddellada, sideen ula macaamili karnaa dhammaan jahwareerka?
Sidee dhacdooyinka loo calamadeyn doonaa?
Muxuu noqon doonaa aqoonsiga gaarka ah ee socodka xogta la xushay?
Sideen u daryeeli doonnaa amniga iyo arrimaha gaarka ah?
Sideen ku ururin karnaa xogta halka ay ka jiraan xadeynta xog ururinta?
Isku darida xogta waxay qulqushaa qulqulka. Tixgeli kuwan soo socda:
Mabaadi'da ugu weyn ee ETL: Ma nooc dufcad ah ama durdur nooca wareejinta xogta?
Sideen u calaamadeyn doonnaa isku xirka wareejinta xogta iyo durdurrada?
Sideen ugu waafajin doonnaa isla qorshaha xogta iyadoon khasaaro iyo qaladba dhicin?
Su'aalaha waqtiga iyo taariikhda: Sidee ayaan u hubin doonaa timestamps-ka?
Sideen ku ogaan karnaa haddii dayactirka xogta iyo kobcinta ay si sax ah ugu shaqeynayaan jadwalka waqtiga?
Sideen u xaqiijin doonaa hits? Maxaa ku dhaca garaacis aan waxtar lahayn?
Marxaladda isu geynta xogta. Waxyaabaha la tixgelinayo:
Dejinta khaaska ah ee hababka ETL: Maxaan ku samayn karnaa xogta aan ansax ahayn?
Dufcad ama tirtir?
Ma ka heli karnaa faa'iido?
Sidee saameyn ugu yeelan doontaa tayada xogta la dejiyey oo dhan?
Mabda’a koowaad ee dhammaan marxaladahaas ayaa ah in khaladaadku is dulsaaran yihiin oo midba midka kale ka dhaxlayo. Xogta lagu soo uruuriyay cillad heerka koowaad ah waxay madaxaaga waxyar ka yeeli doontaa inta lagu jiro dhammaan heerarka xiga. Mabda 'labaadna waa inaad doorataa dhibco si loo hubiyo tayada xogta. Sababtoo ah marxaladda isku-darka, dhammaan xogta waa la isku qasan doonaa, mana awoodi doontid inaad saameyn ku yeelatid tayada xogta isku dhafan. Tani runti muhiim ayey u tahay mashaariicda barashada mashiinka, halkaasoo tayada xogta ay saameyn ku yeelan doonto tayada natiijooyinka barashada mashiinka. Natiijooyinka wanaagsan lama heli karo iyadoo leh xog tayo hooseysa.
Tani waa marxaladda agaasimaha. Waxaa laga yaabaa inaad wax ka maqashay xaalada markii Maamulaha guud eegay lambarrada dashboardka oo uu ku yiri: “Waayahay, waxaan helnay faa'iido badan sanadkan, xitaa in ka badan sidii hore, laakiin waa maxay sababta dhammaan qeybaha maaliyadeed ee aagga cas ? ” Xilligan la joogo, waa xilli dambe in la raadiyo khaladaadka, sidii ay ahayd in wakhti hore la qabto.
Wax walba waxay ku saleysan yihiin isgaarsiinta. Iyo mawduucyada wadahadalka. Waa kuwan tusaalaha waxa laga wada hadlayo inta la diyaarinayo Yandex qulqulka:
Jawaabaha su'aalahan badankood waxaad kaheli doontaa kooxdaada oo dhan. Sababtoo ah marka qof uu gaaro go'aan ku saleysan mala awaal ama fikrad shaqsi ah isaga oo aan tijaabin fikradda dadka kale, khaladaad ayaa soo bixi kara.
Dhibaatooyinku meel walba way yaalaan, xitaa meelaha ugu fudud.
Halkan waxaa ah hal tusaale oo dheeri ah: Markaad raadineyso dhibcaha aragtida kaararka wax soo saarka, falanqeeye ayaa ogaanaya qalad. Xogta la garaacay, dhammaan dareenka laga helay dhammaan boorarka iyo kaararka wax soo saarka ayaa la diray isla markii bogga la soo raro. Laakiin ma hubi karno haddii adeegsaduhu uu runtii eegay wax kasta oo bogga ku yaal. Falanqeeyaha ayaa u imanaya kooxda si uu ugu wargeliyo arrintan si faahfaahsan.
BI waxay dhahdaa kama tagi karno xaalada sidaa oo kale ah.
Sideen u xisaabin karnaa CPM haddii aynaan xitaa hubin karin in sheyga la muujiyay? Muxuu yahay CTR u qalma sawirrada markaa?
Suuqyayaashu waxay ku jawaabaan:
Fiiri, qof walba, waxaan abuuri karnaa warbixin muujineysa CTR-ga ugu fiican oo aan ku xaqiijin karno la mid ah calan hal abuur leh ama sawir ah oo meelo kale ku yaal.
Kadibna horumariyayaashu waxay oran doonaan:
Haa, waan ku xallin karnaa dhibaatadan caawimaadda is-dhexgalka cusub ee raadinta duubista iyo baaritaanka aragtida mawduuca.
Ugu dambeyntii, naqshadayaasha UI / UX waxay yiraahdaan:
Haa! Waan dooran karnaa haddii aan u baahanahay duubnaanta ama duudduubnaanta weligeed ah ama jaangooynta ugu dambayn!
Waa kuwan tallaabooyinka ay kooxdan yari soo martay:
Soo bandhigtay cawaaqibka ganacsi ee dhibaatada
Cabbiray saameynta isbeddelada
Go'aamo farsamo la soo bandhigay
La ogaaday faa'iidada aan yareyn
Si loo xaliyo dhibaatadan, waa inay hubiyaan xog ururinta dhammaan nidaamyada. Xalka qayb ka mid ah qorshaha xogta ma xallin doono dhibaatada ganacsiga.
Taasi waa sababta aan u wada shaqeyno. Xogta waa in si mas'uuliyad leh loo ururiyaa maalin kasta, waana shaqo adag in taa la sameeyo. Iyo tayada xogta waa in lagu gaaraa shaqaalaynta dadka saxda ah, iibsashada qalabka saxda ah, iyo maal galinta lacag, waqti, iyo dadaal lagu dhisayo qaabab isgaarsiineed oo wax ku ool ah, kuwaas oo muhiim u ah guusha ururka.
Tags: BigQueryxog ururintaWareejinta xogtaMuujinta Xogtaistuudiyaha xogta googleisgaarsiinta suuq geyntaowox biYandexdhinaca kale
6 Sababaha Dib-u-dejinta Blog-kaaga WordPress